Cagaarshowga (hepatitis) oo si la mid ah Aids ama TB' ay u dhintaan dad badan | shumis.net
Home » Caafimaadka » Cagaarshowga (hepatitis) oo si la mid ah Aids ama TB' ay u dhintaan dad badan
Cagaarshowga (hepatitis) oo si la mid ah Aids ama TB' ay u dhintaan dad badan
Cudurka cagaarshowga ama afka qalaad loo yaqaano hepatitis waa mid ka mid ah cudurada dilaaga ee adduunka oo dhan, iyadoo tirada dhimashada uu la mid yahay sida Aids ama qaaxada , sida ay soo jeedisay cilmi baarisata The Lancet .
Warbixintu waxay ku qiyaastay in caabuqyada hepatitis iyo dhibaatooyinkiisa ay keentay dhimashada 1.45m oo qof sanadii 2013 - inkastoo ay jiraan tallaalada iyo daaweynta cudurkaasi.
Tirakoobka Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa muujinaya inay jiraan 1.2m dhimashada Aids la xiriira-sanadii 2014, halka TB dhimashada ay aheed 1.5 milyan.
WHO ayaa horey usoo bandhigtay istaraatijiyad caalami ah si wax looga qabto natiijada hepatitis.' Cilmi baarayaasha ayaa sheegay in qorshayaashaas lagu tallaabo qaadaa si degdeg ah si wax looga qabto dhibaatada cudurka.
Cudurka cagaarshowga ayaa u qaybsama shan noocyada kala duwan ee fayruska ( loo yaqaano A, B, C, D, E) - qaar ka mid ah waxaa lagu faafin karaa iyada oo loo marayo inuu ku taabto ama ay dadka isku gudbiyaan dhacaanka jirka iyo kuwa kale (A iyo E) ayaa iyagu lagu qaadi karaa cunto ama biyo wasakhaysan.
dhimashada Inta badan dunida oo dhan ee cudurka cagaarshowga ayay sabab u tahay B iyo C, taas oo keeni kartaa dhaawac halis ah beerka iyo dadka uu ku dhici karaa kansarka beerka. Laakiin inta badan, dadka mar walba ma dareemaan calaamadaha cudurka hore, waxay noqon kartaa kuwa aan ka war qabin dhaawaca muddo dheer ilaa ay goori goor tahay.
Title: Cagaarshowga (hepatitis) oo si la mid ah Aids ama TB' ay u dhintaan dad badan